musha nyika dzakabatana Comedians Dave Chappelle Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Dave Chappelle Biography inoratidza Chokwadi pane yake yehucheche nyaya, hupenyu hwepakutanga, nhengo dzemhuri, vabereki, rudo hupenyu, mambure akakosha, mararamiro, uye hupenyu hwehupenyu. Mukukosha, isu takaisa pamwechete ongororo yakazara yehupenyu hwake nyaya iyo inotanga kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakava iye mutambi ane mukurumbira iwe wawaimuziva kuti ndiye.
Nyaya Yehupenyu yeDave Chappelle. Ona Hupenyu hwake uye Rise. 📷: Pinterest, blackvibes uye imdb
Pakati pevazhinji vedzinza reAmerica vakawana mukurumbira mumakore mashoma apfuura, Dave akaita chirevo. Izvo hazvitauri kutaura kuti ndiye mumwe we akanakisa kusimuka-up Comics yenguva yose. Nyaya yehupenyu hwaDave Chappelle inosanganisira matani ezviitiko zvinoshamisa zvatiri kuda kuzarura. Usaende chero kupi! Verenga pamusoro apo isu patinotanga neyekutanga biography.
Dave Chappelle Nyaya Yevechidiki:
Dave Chappelle muHuduku hwake- Pinterest.
Kune kutanga, mazita ake akazara David Khari Webber Chappelle. Dave akazvarwa pazuva re24th raAugust 1973 kuna amai vake, Yvonne K. Chappelle Seon, nababa vake, William David Chappelle III muWashington DC, United States. Vabereki vaDave Chappelle vakaita kuti ave iye semudiki pavana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa wavo.
Somukomana mudiki, Dave ainakidzwa nekuva pamwe chete nevakoma vake vaviri mukoma pamwe nekumbundira kwoushamwari kwamai vake. Kuzadzwa nemufaro wekusangana nevakakurumbira avo vaiwanzogara pamba pake yaive imwe yeyekufadzwa kukuru kwaDave paudiki. Kurudziro nezviitiko zvakagovaniswa nevanhu vane mukurumbira vaakasangana navo zvakamukanda mune ramangwana raakange asarudza.
Dave Chappelle Mhuri Dzinobva:
Ruvara rweganda raComedian runotaura zvese. Kutarisa kuna Dave Chappelle Mhuri Yemhuri kunoratidza kuti vese sekuru nasekuru vake vatema. Mukupfupisa, Ethnicity yake ndeyeAfrica -America. Kwemakumi mashoma emakore apfuura, madzitateguru aDave akanyanya kuteverwa kuIvory-Coast muAfrica. Nekudaro, yake Mhuri Midzi achiri akabata rekodhi yemuvhenganiswa nhaka, nekuda kwekutsvagisa kwevachena vachena mumadzinza amai vake.
Pakusiya Africa, madzitateguru aDave akazogara kuNorth America. Sezvineiwo, sekuru vake vakazvarwa muTennessee zvinoreva kuti imba yake inogona kunge yakagara imomo kwechinguva. Nekudaro, Mhuri yaDave Chappelle iri mushe yekutaura Chirungu inova mutauro wepamutemo muTennessee.
Mhuri yaDave Chappelle Yemhuri yakateerwa ku Africa, kazhinji Ivorian- Pinterest uye Kenyanwallstreet.
Dave Chappelle nhoroondo yemhuri:
Kuberekerwa mune zvematongerwo enyika zvine chekuita neMhuri zvakapa vechidiki vekuAmerica mukana wekusangana nevaimbi vaviri vane mukurumbira vanoti; Pete Seeger naJohny Hartman. Pakusangana nevanozivikanwa vambotaurwa, hupenyu hwaDave hwakave hwakanangana nekuwana mukurumbira.
Zvinosekesa zvakakwana, mukomana mudiki wemuAmerican mukomana akambowanzoita sekunge akagadzirwa kuve mutengesi kubva pakuzvarwa. Ndosaka Johnny Hartman akafanotaura zviri nyore kuti Dave achakura kuva mutungamiriri anozivikanwa.
Dave Chappelle achikura makore:
Kukurira muSilver Spring Maryland, Dave akatungamira hupenyu hwekufara uye nguva dzose airatidza hunhu hunonakidza hwaiita kuti vanhu vaseke. Vazhinji vamwe vana vakakweverwa nyore nyore kune aura wake. Nekudaro, Dave anogona kushamwaridzana chero munhu pasina chero kusagadzikana.
Pakutanga achiri achiri mudiki, zvinhu zvakatora kusuruvara kutendeuka kwevabereki vaDave Chappelle. Vechidiki vemuAfrica -America vakaona kupatsanurwa kwevabereki vake. Pachinyorwa ichi, aifanira kugara mukati maamai vake muWashington paanopedza zhizha nababa vake muOhio.
Dave Chappelle dzidzo:
Dave achidzidza kuWoodlin Elementary School, akatanga kufarira Eddie Murphy naRichard Pryor. Pasina imwe nguva iri kure, akatanga kudanana nekuita kwavo uye akakurumidza kusvika mukunyepedzera.
Akawana dzidzo yake yekutanga kubva kuWoodlin Elementary School. 📷: twitter
Nguva pfupi yapfuura chikoro chekutanga, Dave akanyoresa kuEllington Chikoro cheBoka uye akakudzwa muhunyanzvi. Nechido chikuru, mudiki Dave akaisa pfungwa dzake pazvinhu zvedzidzo uye munguva pfupi akapedza zvidzidzo zvake.
Dave Chappelle hupenyu hwepakutanga ne Comedy:
Kutevera kudzidza kwake kukoreji, wemuAfrica -America akatanga kuita kwake kwenyaya. Akatanga basa rake mumhanzi nekuonekwa muchikamu chekutanga cheABC's America's Funniest People iyo yaisanganisira vanhu vasina kujairika vachitaura majee.
Ona kuti aive mudiki sei pakutanga kwerwendo rwake rwe mukurumbira. 📷: mavambo
Anosekesa rookie pasina nguva akatamira kuNew York City kuitira kuti aenderere mberi nebasa rake mukutamba. Kunyangwe iye anga asati ave nezve izvo ramangwana rakabata, Dave aive akagadzirira kupa ake akanakisa mune mamwe kuti ave mutambi anobudirira.
Dave Chappelle mugwagwa weku mukurumbira nyaya:
MuNew York City, Dave akawana mukana wekunoridza pamberi pevane mukurumbira veAmateur Night vateereri kuApollo Theatre. Ehezve, akaita zvese zvaaigona kuita pakuratidzira. Nekudaro, iye aisakwanisa kuhwina moyo wevateereri vake nemumhanzi wake. Nekudaro, vateereri vake vakamupopotera kubva pachikuva.
Zvinoshamisa kuti, chiitiko icho chaifanira kunge chakaodza mwoyo murauri wezvekushanduka chakave chinonyanya kukurudzira. Achirondedzera kunyadziswa kwaakasangana nako panguva yechiratidziro, Dave akataura kuti chiitiko ichi chakamupa zvakare ushingi hwekuenderera mberi nebhizinesi rake rekuratidzira.
Dave Chappelle anomuka ave mukurumbira nyaya:
Pasina kukanda mapfumo pasi, Dave munguva pfupi akakwira mukurumbira uye akazviitira zita mudenderedzwa revatambi. Nekugadzikana uye kuzvipira, mutambi wemuAmerica akawana mukana wekuonekwa paHBO Def Kuputsa Jam. Kuita kwake munhevedzano kwakamuita kuti atende uye ave nemukurumbira.
Chii chingadai chakave chedu veteran comedian dai iye akakurumidza kurega munzira yake yebasa semhedzisiro yezvipingamupinyi zvake zvekutanga? Neraki, isu tinogona ikozvino kunakidzwa nekomedhi yaDave padivi pevamwe vanozivikanwa vanoita sevada Chris Rock uye Kevin Hart.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora iyi biography, Dave akaita kuwoneka kwakawanda pamafirimu ane mukurumbira. Akasvikira pakakwirira mukuseka uye akakunda mibairo yakawanda yebasa rakanyatsoitwa kubva paakakwira mukurumbira.
Akanaka kwazvo nebasa rake zvekuti akahwina Mubairo weGrammy.
Dave Chappelle anoda chokwadi:
Pamusoro pekubudirira kwake, Dave ave kugona kuchengetedza hukama hwakanaka. Kusiyana nevamwe vazhinji vakakurumbira, mutambi wetsiva akatamba mukadzi mumwe chete kubva paakakwidzwa mukurumbira.
Chinhu chinonyanya kufadza pamusoro peRudo-Hupenyu ndechekuti akaroora musikana wake mumwechete anozivikanwa, Elaine Mendoza Erfe. Vaviri vacho, vanofananidzirwa pazasi vakasungira banga racho mumutambo wakadzika wezana mugore ra2001.
Ona kuti kunaka kwazvo uye kubwinya kweshiri dzerudo dzinotaridzika sei. 📷: zestvine
Zvizhinji nezveDave Chappelle's Wive uye Vana:
Elaine Mendoza Erfe akaberekerwa mumhuri yePhilippines muNew York mugore ra1974. Anowanzo chengetedza hupenyu hwakadzikama uye hwakavanzika asati asangana naDave. Mushure mekuroora kwavo, Elaine akaberekera Dave Chappelle vana vatatu. Achibayira basa rake, mukadzi waDave akatora chinzvimbo chemukadzi akazara wemba kuti arere vana vavo.
Kusvika parizvino, Dave nemukadzi wake vachiri kugara pamwe chete uye vanonakidzwa nehupenyu hwemhuri hunofadza. Mukati meimba yaDave Chappelle vari vatatu vana vanosanganisira vaviri vanakomana vanoti Sulayman, uye Ibrahim pamwe nemwanasikana anonzi Sanaa.
Mhuri yake inogara ichinakidzwa nekubuda pamwe- Familytron.
Dave Chappelle Hupenyu Hwemhuri Hwechokwadi:
Mumakore mashoma ekutanga ekuzvarwa kwake, Dave akanakidzwa nekudziya kwemhuri inoshamisa. Nekudaro, mufaro wake hauna kugara kwenguva refu nekuti vabereki vake vakazorambana. Saka Dave ane amai vokurera pamwe nehama mbiri-nhanho. Pazasi pane izere izere yenhengo yega yega yemhuri yakawedzerwa yaDave.
Nezve Amai vaDave Chappelle:
Kuseri kwemurume wese akabudirira mukadzi. Panyaya yaDave, amai vake (Dr Yvonne Seon) ndemumwe wevatevedzeri vake avo vakamubatsira kushanda nesimba mukuwana kubudirira kwaanako nhasi. Amai vaDave, Dr Yvonne Seon vakave wekutanga kupemberera mukurumbira mumhuri yake. Nguva pfupi yapfuura, Dave akatevera. Amai vanozvikudza vanoratidzwa pazasi apo iye achipemberera kugona kwake sapiyona weAfrican American Studies.
Amai vaDave vanoratidzira mamwe emubairo wake uye kukudzwa. 📷: familytron
Sezvineiwo, amai vaDave Chappelle vakadzidza kwazvo. Akawana PhD yake kubva kuUnited University. Parizvino, ari kudzidzisa kuPrince George's Community College. Vese vateveri vemudikani wedu akapembererwa vane kodzero yekumupembererawo nekuunza Dave munyika nekumurera kuva murume anoshamisa.
Nezve Baba vaDave Chappelle:
Ingangove iyo nguva iyo Dave akakunda rake rekutanga basa rekuita mufirimu, akasuwa akarasikirwa nababa vake. Ivo baba vaDave Chappelle, William David Chappelle III aive purofesa aidzidzisa mimhanzi kukoreji. Asati ave purofesa, William akange achishanda nesimba asingaverengeki. Kunyangwe nenyaya yekuti akarambana naamai vaDave, Dave Chappelle achiri kunamata baba vake.
Nezve Dave Chappelle's Nhanho-Amai:
Nehurombo, baba vaDave vakarambana naamai vake aine makore matanhatu chete. Mushure menguva yakati akaroorazve mumwe mukadzi anonzi Joan Chappelle. Nekufamba kwenguva, Joan akaberekera William vana vaviri. Senge panguva yekunyora iyi biography, amai vaDave-amai vanomhanya yavo yega zita inonzi Joan Chappelle Counselling.
Nezve hama dzaDave Chappelle:
Dave Chappelle ane vanin'ina vaviri. Iye mukoma mukuru, William Sedar Chappelle ane vanakomana vaviri uye anogara nemukadzi wake nevana muYellow Springs, OH. Kune rimwe divi, hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve hanzvadzi yaDave mukuru, Felicia Chappelle.
Mufananidzo usingawanzo wehama yedu yemushamarari wemhuri naMhuriTron.
Nekudaro, panguva yekubvunzurudzwa, Dave akaburitsa pachena kuti hanzvadzi yake yaive yakaipa mumazuva ake ehudiki uye aifanira kubata nekurema. Nhanho-mukoma uye nhanho-hanzvadzi yaDave kubva kumuchato wechipiri wababa vake ndiFatimah Akinyele naJusuf Abdullah zvichiteerana. Zvinoita kunge mumwe wevabereki vaDave Chappelle (baba vake) akazove nehukama nemukadzi wekuNigerian mabviro.
Vachitaura nezvedzinza rake, sekuru naambuya vaDave vaive Henry Talmage Chappelle naLeola Webber. Kune rimwe divi, vanasekuru vaamai vaDave vaive George Raymond Reed naBeatrice Murray. Iko hakuna ruzivo nezve muzukuru wake. Zvisinei, Dave ane vazukuru vaviri vanozivikanwa vanoti; Naseem naSumayah.
Hupenyu Hwega hwaDave Chappelle Chokwadi:
MuAmerican comedian haasi kungo nyudzwa mumasheduleti ebasa rake rekuyedza. Nguva nenguva, Dave anowanzo tora zororo kubva kubasa kuti aite zvido zvake. Kana iwe usingazive, Dave Chappelle anoda skateboarding. Pane akati wandei, akave akafananidzirwa aine skateboard yake achifamba padyo nemhuri yake. Pazasi pane photoshoot yemuseki ine skateboard.
Dave Chappelle nemhuri yake, kunze kweku skateboarding naRebloggy.
Zviri pachena kuti ichokwadi kuti Dave Chappelle's persona musanganiswa wechiratidzo cheVirgo Zodiac. Chokwadi, African-American aratidzira hunhu hwehoridhepi yake. Akadzika pasi uye ane pfungwa yekuongorora. Kana zvasvika pakutora sarudzo, Dave anovimbisa kuti anonyatsofunga nezvemaonero ake asati aita chero mazano.
Dave Chappelle Hupenyu Hwechokwadi:
Kunyangwe kugadzira matani emari, Dave akachengetedza chimiro chakaderera cheMararamiro, nekuda kwezano raakawana kubva kumukadzi wake. Panguva yekunyora yake Hupenyu Nyaya, Dave akaunganidza mari inofungidzirwa yeNet Worth yemadhora makumi mashanu emamiriyoni. Kwemakumi maviri emakore apfuura, muvhimi anomira-up comedian akaisa chisungo chekubvumirana kubata nezvose zviri zviviri Coca-Cola naPepsi.
Imba yaDave Chappelle:
Pamusoro pebasa rake rekuseka, Dave akaramba kusaina chirairo chemadhora makumi mashanu emamiriyoni neVietnam Central nekuda kwekuti aida kuenda kuYellow Springs nharaunda yeOhio. Iye ane 50 sq.ft. imba inodhura madhora zviuru makumi maviri nezvishanu, mazana matatu nemashanu kuOhio uye izvozvi anogara ikoko nemhuri yake. Pamusoro peimba yake iri pazasi, Dave ane dzimba zhinji dziri munzvimbo dzakasiyana muUS
Maonero asingawanzo eimba yaDave Chappelle- inosundirwa.
Mota dzaDave Chappelle:
Nekufamba kwake, Dave akachengeta mizhinji yemabhiza anodakadza muunganidze wake wemotokari. Anogara achifananidzirwa achityaira mhando dzakasiyana dzemotokari dzekunze. Sezvineiwo, ane chena yakanakisa yakachena Porsche 911 Carrera S Cabriolet, Toyota Cayenne, Range Rover Sport, Lexus LS460, uye Roll Royce Phantom drophead coupe.
Muone achiratidza chena yake chena Porsche 911 Carrera S Cabriolet muhukuru maitiro- Justjared.
Dave Chappelle Husingazivikanwe Chokwadi:
Kuputira yedu dave Chappelle's Biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezveAmerican anomira-mudhi anozokubatsira iwe kuti unzwisise zvizere nezve Hupenyu Hwake Nyaya.
Chokwadi # 1: Chitendero:
Vabereki vaDave Chappelle vasati vamuberekera vaishanda imba yeUniarian. Kunyangwe zvakadaro, Dave kubva pane zvechitendero maonero haawanzo kutaura nezvezvaaitenda iye. Kazhinji nguva, anowanzozivisa vezvenhau kuti chikonzero chekunyarara kwake pachinamato chake nekuti haadi kuti chero munhu abatanidze zvikanganiso zvake nechinhu chakanakisa. Zvisinei, Chappelle akazoonekwa kuti akatendeukira kuIslam mu1998.
Chokwadi # 2: Kuda Kwemutambo:
Kunze kwekutamba kwake mune skateboarding, Dave anodawo kutamba mitambo. Muchokwadi, iye anofarira vhidhiyo-gamer. Panguva yekunyora iyi Biografia, Dave Chappelle ane iyo Hondo yeHuroyi account.
Sezvo zuva resarudzo dzemutungamiri wenyika yeUnited States makumi maviri dzaswedera, Dave Chappelle akasimbisa Andrew Yang pamberi pesarudzo. Kunze kwekubatanidzwa kwake mukugovana maonero akati wandei ezvematongerwo enyika, muAmerican comedian zvakare mumiriri weCarity. Akatopa imwe yenguva yake kuSeed of Peace International Camp.
Wiki yaDave Chappelle:
Yedu wiki zivobase yaDave Chappelle ipfupiso yeiyo bio yake. Iyo tafura ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezve munzira yakapfava uye inoshanda.
Zita rizere: David Khari Webber Chappelle
Nick Zita: Dave
Zuva rekuzvarwa: 24th August 1973
Nzvimbo yekuzvarirwa: Washington DC
Baba: William David Chappelle III
Amai: Dr. Yvonne K. Chappelle Seon
Nhanho-Amai Joan Chappelle
Vanun'una: William Sedar Chappelle naFelicia Chappelle
Matanho-Vakoma Fatimah Akinyele naJusuf Abdullah
Wife / mukadzi / murume / mukadzi: Elaine Mendoza Erfe
Vana: Sulayman, Ibrahim uye Sanaa.
Net Worth: $ Miriyoni 50
Zodiac Tsika: Virgo
6 ′ 0 ″ - nemakumbo
Dave Chappelle nyaya yehucheche yakanyatsotsanangudza kuda kwekupokana. Dambudziko rake rekutanga uye kukunda kwake kunoratidza kuti munhu wese anogona kusangana nematambudziko akasiyana. Nekudaro, tariro chete uye positivity zvinogona kubatsira munhu kuchengetedza kuvimba kwavo kana vakatarisana nematambudziko.
Yevabereki Biography tinokutendai nekuverenga nyaya yehupenyu hwaDave Chappelle. Inzwa wakasununguka kugovana maonero ako nezve zvaunoda pakati paDave Chappelle, Chris Rock, Nick Cannon, uye Kevin Hart's komedhi. Moreso, taura nesu kana iwe ukaona chero chinhu chisina kukodzera muchinyorwa chedu.